ဝါရှင်တန်တွင် မီးရထားလမ်းချော်ကာ တံတားပေါ်မှ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ထိုးကျ၊ အနည်းဆုံးသုံးဦးသေ?? - Yangon Media Group
ဝါရှင်တန်တွင် မီးရထားလမ်းချော်ကာ တံတားပေါ်မှ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ထိုးကျ၊ အနည်းဆုံးသုံးဦးသေ??
ဒျူးပွန့်(အမေရိကန်)၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉- အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန် ပြည်နယ်တွင်း ပြေးဆွဲ နေသော တောင်ပိုင်းလိုင်း အမှတ်(၅ဝ၁) Amtrak ခရီးသည် တင်မီးရထားသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်က တံတားပေါ်မှ လမ်း ချော်ကာ အသွားအလာ ထူထပ်ပြီးလူစည်ကားသော အမြန် ကားလမ်းမပေါ်သို့ ထိုးကျသွားခဲ့၍ အနည်းဆုံး လူသုံးဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု မီးရထားအာဏာပိုင်များက ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၄ဝ (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၁၅၄ဝ နာရီ)က ပြည်နယ် မြို့တော်အိုလံပီယာနှင့် တာကိုမာမြို့ အ ကြား လမ်းကွေ့တွင် မီးရထားဝန် ထမ်း ခုနစ်ဦးကြီးကြပ်လိုက်ပါလာ သည့်အတွဲ ၁၄ တွဲပါရှိသော ယင်း ရထားလမ်းချော်ကာ တံတားပေါ် မှ ထိုးကျခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တွဲဆိုင်း ငါးတွဲ လမ်းချော်တိမ်းမှောက်ကာ ရထားတွဲတစ်တွဲ အမြန်လမ်းမ ကြီးပေါ် ထိုးကျပြီး ကျန်ရထားတွဲ များမှာ တံတား၌ တွဲလောင်းချိတ် နေမှုကြောင့် ဆီယက်တဲလ်နှင့် အို လံပီယာမြို့အကြား အဓိကလမ်း မကြီးမှာ နာရီအတန်ကြာပိတ်ဆို့ သွားခဲ့ရသည်။ တံတားအောက်ရှိ လူသွားလူလာ ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ချေ။
ရထားလမ်းချော်ကာ တံတား ပေါ်မှထိုးကျခဲ့မှုကြောင့် လူသုံးဦး အနည်းဆုံးသေဆုံးခဲ့ရပြီး ဒဏ်ရာ ရသူအများအပြားကို ကယ်ဆယ် ရေးလုပ်သားများက ကူညီကယ်ဆယ် နေသည်ဟု ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ တပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဘရွတ် ဘိုဗာကပြောဆိုလိုက်သည်။
ရထားလမ်းချော်ရခြင်းအ ကြောင်းရင်းကို အာဏာပိုင်များ က စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်။
မောင်တောရှိ အခြေခံပညာကျောင်း ၈၂ ကျောင်းကို ယခုပညာသင်နှစ် ကုန်ဆုံးသည်အထိ ဖွင့်လှစ်တော့မည်မ
ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ပျက်စီးရေး ဦးတည် လုပ်ဆောင်လာခြင်းများကို အစိုးရ